Adeegga Taageeridda Shiinaha ee dhammaan noocyada dhejiska wax -soo -saarka iyo Warshadda | KORINTA-Elec
Waa maxay xirxirayaashu?
Fastener waa magaca guud ee nooc ka mid ah qaybo farsamo oo loo isticmaalo in lagu xidho oo lagu xiro laba ama in ka badan (ama qaybo) guud ahaan. Sidoo kale loo yaqaan qaybaha caadiga ah ee suuqa.
Caadi ahaan waxaa ku jira 12 nooc ee qaybaha soo socda:
Boltyada, baloogyada, boolal, lowska, boolal is -garaacis ah, boolal alwaax ah, makiinadaha dhaqa, siddooyinkii xafidayay, biinanka, rivets, golayaasha iyo lammaanaha isku xira, ciddiyaha alxanka.
(1) Bolt: nooc ka mid ah xirxiriyaha oo ka kooban madaxa iyo fur (dhululubo leh dun dibadda ah), oo u baahan in la waafajiyo lowska si loo xiro loona xiro laba qaybood oo leh daloolo. Xidhiidhka noocan ah waxa la yidhaahdaa isku xidhka bool. Haddii lowska laga xiro balka, labada qaybood waa la kala saari karaa, sidaa darteed isku xirnaanta boolisku waxay ku xiran tahay isku -xirka la saari karo.
(2) Dareemid: nooc ka mid ah dhejiyaha oo aan lahayn madax oo kaliya dunta dibadda ee labada daraf. Markaad isku xireyso, hal daraf waa in lagu dhejiyaa qeybta leh daloolka dunta gudaha ah, dhammaadka kale waa inuu dhex maraa qeybta daloolka leh, ka dibna ku dheji lowska, xitaa haddii labada qaybood ay si adag isugu xiran yihiin guud ahaan. Foomka isku -xirkaan waxaa lagu magacaabaa isku -xirka studka, kaas oo sidoo kale ah xiriir laga saari karo. Waxaa inta badan la adeegsadaa marka mid ka mid ah qaybaha ku xiran uu leeyahay dhumuc weyn, u baahan qaab dhismeed isku dhafan, ama aan ku habboonayn isku xiridda boollada sababta oo ah kala -soocidda soo noqnoqota.
(3) Ku marooji: sidoo kale waa nooc ka mid ah xirxiriyaha oo ka kooban madaxa iyo fur. Waxaa loo qaybin karaa saddex qaybood iyada oo loo eegayo ujeeddada: fur qaab -dhismeedka birta, fur -fur iyo ujeedo ujeeddo gaar ah leh. Boorsooyinka mashiinka waxaa inta badan loo adeegsadaa isku xirka u dhexeeya qayb leh dalool go'an oo go'an iyo qayb leh dalool, iyada oo aan la mid ahayn lowska (foomkan isku xirnaanta waxaa la yiraahdaa isku xirka furitaanka, kaas oo sidoo kale iska leh isku xirnaanta meesha laga saari karo; Waxa kale oo lala jaan qaadi karaa lowska loogu talagalay isku xirka labada qaybood ee leh daloolada Boolal ujeedo gaar ah leh, sida indha shareerka, ayaa loo adeegsadaa kor u qaadista qaybaha.
(4) lowska: oo leh dalool dunta gudaha ah, qaabku guud ahaan waa tiirar lix geesle ah, ama tiir laba jibbaaran oo fidsan ama dhululubo siman. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro oo lagu xiro laba qaybood oo dhan oo leh boolal, baraha ama boolal dhisme bir ah.
(5) Furaha is -taabashada: waxay la mid tahay dabool, laakiin dunta ku taal furku waa dun gaar ah oo loogu talagalay taabashada is -taabashada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro oo lagu xiro laba qaybood oo bir ah oo dhuuban si guud. Daloollada yaryar ayaa loo baahan yahay in hore loogu sameeyo qaybta. Sababtoo ah furku wuxuu leeyahay adayg aad u sarreeya, waxaa si toos ah loogu dhejin karaa daloolka qaybta si loo sameeyo xargaha gudaha ee ku jira qaybta. Foomkan isku xirka ayaa sidoo kale iska leh isku xirnaanta laga saari karo.
(6) Ku-xidh alwaax: waxay la mid tahay daboolka, laakiin dunta ku taal furku waa dun gaar ah oo loogu talagalay daboolidda qoryaha, kaas oo si toos ah loogu dhejin karo qaybta alwaaxda (ama qayb) si adag loogu xiro bir (ama aan bir ahayn) ) qayb dalool leh oo leh alwaax. Xidhiidhkani sidoo kale waa xidhiidh la kala saari karo.
(7) Dhaqe: nooc ka mid ah dhejiyeyaal leh qaab wareegsan oo fidsan. Waxaa la dhigaa inta u dhexeysa dusha taageerada boolal, boolal ama lowska iyo dusha qaybaha isku xirka, kaas oo ka ciyaara doorka kordhinta aagga xiriirka ee qaybaha ku xiran, yaraynta cadaadiska aag kasta iyo ilaalinta dusha qaybaha ku xiran dhaawaca; Nooc kale oo dhaqe dabacsan ayaa sidoo kale ka hortagi kara in lowska uu dabciyo.
(8) Giraanta haynta: waxaa lagu dhejiyaa jeexitaanka ama jeexa godka ee qaab -dhismeedka birta iyo qalabka si looga hortago in qaybaha qodaalka ama daloolka ay u dhaqaaqaan bidix iyo midig.
(9) Pin: waxaa inta badan loo adeegsadaa meelaynta qaybaha, qaarna sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa isku xirka qaybaha, hagaajinta qaybaha, gudbinta awoodda ama xiritaanka xirayaasha kale.
(10) Rivet: nooc ka mid ah xirxiriyaha oo ka samaysan madaxa iyo usha ciddiyaha, kaas oo loo isticmaalo in lagu xiro oo lagu xiro laba qaybood (ama qaybo) godad si looga dhigo mid dhan. Xidhiidhka noocan ah waxa la yidhaahdaa xidhiidhka rivet, ama riveting oo gaaban. Waa isku -xir aan laga saari karin. Sababtoo ah si loo kala saaro labada qaybood ee isku xiran, rivets -ka qaybaha waa in la burburiyaa.
(11) Isku -xirka iyo lammaanaha isku -xirka: isu -imaatinka waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah xirxiriyaha la keenay marka la isu geeyo, sida makiinadda mashiinka (ama bool, makiinadda is -bixisa) iyo makiinadda guriga (ama dhaqe guga, dhaqe quful); Lammaanaha isku-xirka waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah xirxirayaasha oo isku daraya bool gaar ah, lowska iyo dhaqe, sida xoogga-sare ee lamaanaha isku xirka barkad hexagon oo waaweyn oo loogu talagalay qaab-dhismeedka birta.
(12) Ciddinta alxanka: iyada oo ay ugu wacan tahay xirxiraha aan isku midka ahayn oo ka kooban usha qaawan iyo madaxa ciddiyaha (ama aan lahayn ciddiyaha ciddiyaha), waxay si joogto ah ugu xiran tahay hal qayb (ama qayb) iyada oo alxanka, si loogu xiro qaybaha kale.
Aqoon isweydaarsiga qalabka
● Summad: Seibu & Sodick
● Awoodda: Roughness Ra <0.12 / Dulqaad / +/- 0.001mm
● Grinder Profile: 2 Sets
● Summad: WAIDA
● Awood: Qallafsanaan <0.05 / Dulqaadasho +/- 0.001
Hore: Adeegga Qaybaha Birta ee ODM OEM
Xiga: Adeegga is -hagaajinta ee OEM ODM
Xaqiijiyeyaasha saxda ah
Ku xir jumlada
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Dhimashada Magnesium, Aluminium CNC Qaybo Machined, Sheet Birta Stamping Products, Guga Saxanka, Boolal, Dhammaan Alaabta